‘नेपालमा ६० प्रतिशतलाई कोरोना संक्रमण’ - NepalKhoj
‘नेपालमा ६० प्रतिशतलाई कोरोना संक्रमण’
नेपालखोज २०७७ कार्तिक १६ गते १५:२८
कोरोना महामारीका बेला जनमानसमा उब्जिने मुख स्वास्थ्य र काेराेना संक्रमणका विषयमा प्रश्नहरु लिएर नेपालखोज डट कमका सम्पादक बैकुण्ठप्रसाद भण्डारीले ओम समाज डेन्टल हस्पिटलका संस्थापक डा. सुवास घिमिरेसँग गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित
काठमाडौंमा कोराना संक्रमितको संख्या दिनप्रति दिन बढ्दै गइरहेको छ । मुख र नाकबाट कोरोना सर्छ भनेर प्रचार भइरहेको छ त्यही अनुसार मानिस सुरक्षा अपनाइरहेका छन् । तपाईहरुले लकडाउनको बेला पनि मुख स्वास्थ्यका बारेमा सेवा दिइरहनु भएको छ । अहिले काठमाडौंको कोरोनाको अवस्थाबारे तपाईको अनुभवलाई आधार मान्दा तपाई के भन्नु हुन्छ ?
कोरोनाको विषयलाई यति ठूलो कुरा मान्न आवश्यक छैन । सामान्य मान्नु भनेको वेवास्ता गर्नु चाहिँ होइन । डराउनु हुँदैन यसका केही सुरक्षा उपाय छन् । त्यो अपनाएर आफ्नो काम गर्दा हुन्छ । नेपालको स्थिति हेर्दा लक्षण नभएका कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् । उनीहरुमा कुनै प्रकारको कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएको छैन । समान्यतया ट्राभल हिस्ट्रीबाट बिरामीलाई जाँच गर्दा भेटाइएको अवस्था छ । अस्पतालले पनि एउटा प्रोटोकल बनाएको थियो । यो एउटा सामान्य रुघाखोकी हो तर यसको संक्रमण गम्भीर पनि हुन सक्छ । तर, हामीले सामान्य सुरक्षा विधि अपनायौं भने यो रोग लाग्दै लाग्दैन । यसबाट सामान्य तरिकाबाट बच्न सकिन्छ । यसको सर्ने माध्यम छोएर, नजिक गएर, लुगाबाट सर्ने कुरा हामीले विभिन्न माध्ययमबाट पनि सुनेका छौं । ती कुराको लेबल पनि गइसक्यो । अहिले म के भन्छु भने नेपालको अवस्था हर्दा ट्राभल हिस्ट्री भएकालाई मात्र चेक गरेको छ र उनीहरु लक्षण बिनाका संक्रमित बनेका छन् । हामीलाई थाहा छैन न हामी पनि लक्षण बिनाका सक्रमित हो की ? रोग लागेर ठिक भइसक्यौं । जे होस यसको सुरक्षा विधि निकै महत्वपूर्ण छ । यो सर्ने भनेको थुकको छिट्टा ले नै हो । यो अन्य चिजले सर्दैन । यसको माध्यम भनेकै थुक र सिँगान हो ।
काठमाडौंमा कोरोनाको संक्रमण जसरी तिव्र रुपले बढिरहेको छ, यसको अर्थ सरकारले कोरोना संक्रमितको परीक्षणमा बढि प्राथमिकता दियो त्यसकारण संख्या बढ्यो भन्ने ठिक हो ? धेरै जिल्लामा समुदायमा फैलिसककेको अवस्था छ त्यही रुप काठमाडौंमा सुरु भएको अवस्था हो ?
हो । चेक गर्ने हो भने संक्रमितको संख्या धेरै छ । मेरो अनुमानमा नेपालमा ६० प्रतिशत मानिस कोरोना संक्रमित छन् । कति संक्रमितको लक्षण थाहा भएन । यो कुरा नेपालमा चेक गरेको कुरालाई उदाहरण मान्न सकिन्छ । किनभने संकमितमा कुनै लक्षण देखिएको छैन । हामी संक्रमित छैनौं भनेको छ हामीसँग जाँचको आभाव हो ।
१०४. ३ ज्वरो आयो भने कोरोना लक्षण भएको मान्न सकिन्छ । सामान्यतया हामी १०३ ज्वोरो आउँदा पनि सिटामोल खाएर काममा दौडिएको अनुभव छ यसले झन् मानिसमा त्रास फैलन्छ कि फैलँदैन ?
हैन, ज्वरो आउने कारण कोरोना मात्र होइन यो सबैले बुझ्न जरुरी छ । ज्वरो आउने भनेको शरीरमा समस्या आयो भने आउँछ । तपाईलाई पिलो आयो भने पनि ज्वरो आउँछ । कसैको तापक्रम अलि बढी छ भन्दैमा कोरोना संक्रमित हो भन्न मिल्दैन । उसलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर चेक जाँच गर्दा पोजेटिभ देखियो या नेगेटिभ जे भएपनि यो नतिजा सत्प्रतिशत मिल्यो भन्न पनि मिल्दैन । यो विद्यार्थिले सिक्ने क्रममा बनाएको मेसिन हो । यसको ६५ प्रतिशत नतिजा मात्र सत्य हुन्छ । तपाई के मान्नु भने यो एउटा सामान्य फ्लु हो सामान्य सुरक्षा विधि अपनाएर तपाई यसबाट बच्न सक्नुहुन्छ ।
कोभिड १९ का कारण सरकारले लकडाउन गरेपश्चात् पनि तपाईहरु दन्त चिकित्सक भएको नाताले सबैभन्दा जोखिम मुख भनिरहेको अवस्था छ । यो बेला नि जोखिम मोलेर तपाईहरुले घरघरमा पुगेर सेवा दिनुभयो त्यो बेला मानिसहरुले त्रासको कुरा गरेनन् ?
डाक्टरले पूर्वृ तयारी अपनाउनु पर्ने पहिलो कुरा हो । हामीमा एउटा कुरा स्पष्ट छ । यो रोग थुक र सिँगानबाट सर्छ । अब डाक्टरले आफ्नो थुक बिरामी र बिरामीको थुक डाक्टरमा पर्नु दिनुहुँदैन । यसमा मुख्य कुरा सुरुक्षा विधि अपनाउनु पर्याे । यस्ता कुराको ख्याल राखे केही समस्या आउँदैन ।
नेपालको अवस्थामा सुरुदेखि नै माक्स लगाउने पन्जा लगाउने चलन चलाइयो । अहिले पनि माक्स नलगाउनेलाई सय रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको पाइन्छ । अव तपाई भन्नुहोस हामीले माक्सको सदुपयोग गर्यौं या गरेनौं ? जता नि छुनु हुँदैन भनेर हामीले कतै छुनेवित्तिकै सेनिटाइजर दल्छौं यो कतिको उपयोगी हो ?
अहिले विभिन्न किसिमका सेनिटाइजर पाइन्छ । कुनैमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएको छ । ७० प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोगको लागि उचित हुन्छ । सेनिटाइजर सामान्यतया एन्टीबाक्टेरियल हो एन्टीभाइरल होइन । कोरोनालाई एन्टीबाक्टेरियलले काम गर्दैन । हात नै सेनिटाइज गर्ने हो भने सबैभन्दा उचित साबुन पानी नै हो । माक्सको कुरा चाहिँ धेरैले घरमा बस्दा पनि लगाएको पाइयो यदि तपाइृको घरमा कोरोना संक्रमित छैन भने माक्स लाउन जरुरी छैन । बाटोमा हिँड्दा अथवा कोठामा बस्दा मास्क नलगाउनु यसले ठूलो असर गर्छ । एन ९५ माक्सले झन्डै १० देखि १५ प्रतिशत अक्सिजन कम्प्रमाइज गर्छ अर्थात् अक्सिजन लेभल घटाउँछ । यसले फोक्सोलाई डयामेज गराउन पनि सक्छ ।
अनि किन सरकारले माक्स अनिवार्य गरायो ? एउटा रोग जोगाउँदा अर्काे रोगले हामीलाई आक्रमण गरिसकेको हुन्छ । अर्काे रोगको जोखिम हुँदा पनि सरकारले किन माक्स अनिवार्य गर्याे होला ?
यो सरकारले कसरी गर्याेहोला त्यो म भन्न सक्दिन । मलाई लाग्छ सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेको पनि हुन सक्छ । यदि तपाईले माक्स नै लाउने हो भने हुलमूलमा जाँदा कोहीसँग गफ गर्दा मात्रै यसको प्रयोग उचित हुन्छ ।
हामीले फेरी मुख स्वास्थ्यको कुरा गरौं कोरोना पनि मुखबाट नै सर्छ भनिरहेकै छौं यहाँ मुख स्वास्थ्य विज्ञ पर्नुभयो अरुभन्दा मुख स्वास्थ्यलाई खासै ध्यान दिएको पाईदैन मुख स्वास्थमा ध्यान दिनुपर्ने कारण केके छन् बताइदिनु न ?
हामीले कुरा गरिरहँदा कोरोना पनि मुखबाट नै सर्छ भन्यौं । मैले भन्ने गर्छु मुख स्वास्थ्य मुख्य कुरा हो । यसलाई हेला गरियो । कोरोनाको कुरामा नै मुख स्वास्थ्यको डाक्टरलाई बोर्डमा राखिएन । मुख स्वास्थ्को डाक्टरसँगसुझाव लिइएन । हामीले आठ कुरा गर्नु कोरोना सँग नडराउनु यो सँगै हिड्नुस तपाइलाई केही हुँदैन भनेर सुरुवातमै भनेका थियौ । हामीले सुरुमा योग गर्नु भन्यौं, दोस्रो कुरा खानेकुरामा ध्यान, तेस्रो आवश्यक सुताई, खुसी हुन खोज्ने, आत्मबल बढाउने अनि अन्तिममा भिटामिन डीका लागि घाममा बस्ने अनि सामाजिक दुरी कायम गर्ने र हात धुन भनेर २ कुरा थप गर्याैं । यती गर्दा कोरोनाले छोयो भने मलाई टुडिखेलमा झुन्ड्याउँदा हुन्छ ।
कोभिडसँग लड्नसक्ने बच्नसक्ने क्षमता यही मुखले राख्छ मुख स्वास्थ्यको बारेमा बहस र कुरा सबैले उठाए तर पनि तपाईहरु जस्तो विज्ञ किन त्यो टिममा अटाउन सक्नुभएन ?
(हाँस्दै) यो विषय त उहाँहरुलाई नै थाहा होला । यो हामीले गर्ने कुरा होइन तर उहाँहरुले राख्नु चै पर्थ्याे ।
नेपालमा अरु रोगको कारण मर्ने पनि कोभिड कै नाममा दर्ता भएका छन् नी ?
हो । मैले तोकेरै उनीहरु कोभिडले मरेका होइनन् भन्न मिल्दैन । तर, उनीहरु कोभिडको कारणले नै डाक्टरकोमा गएका भने होइनन् । अन्य रोग लिएर उनीहरू डाक्टरकोमा पुगे र कोरोना पनि परीक्षण गराए, मृत्युपछि कोरोना पोजेटिभ भएको नतिजा आयो । कतिको त जलाईसकेपछि नतिजा आयो । तर, नेपालको अवस्थामा प्रतिरोधात्मक शक्ति बढी भएर यो लक्षण कम भएर आएको हुनसक्छ । संक्रमण समुदायमा फैलिसकेको छ । तर, डराउनुपर्दैन सुरक्षा विधि अपनाए केही हुँदैन । यी मैले भनेका आठ कुरा अपनाउनु पर्याे लकडाउनको अब कुनै जरुरी छैन । सरकारले सुरक्षित कसरी रहने भन्ने बारेमा प्रचार गर्नुपर्याे ।